Doctor Strange မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
Lego Marvel ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက်ကောလဟာလသတင်းများသည် Doctor Strange in the Multiverse of Madness ဖြစ်သည်
09 / 10 / 2021 09 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 73 Views စာ0မှတ်ချက် Batman, Black က Panther, ထာဝရက Black Panther Wakanda, Dc, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel စတူဒီယို, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, အဆိုပါ Batman, Thor, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး, Wolverine
Thor နှင့် Black Panther တို့၏နောက်ဆက်တွဲများအတွက်ကောလာဟလသတင်းများထွက်ပြီးနောက်တွင် Doctor Strange အတွက်နောက်ထပ်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုကိုတင်ပြခဲ့သည်
LEGO အဟောင်းတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ် Marvel ကျီစားရင်ဘာဖြစ်မလဲ ... ? ဇာတ်ကောင်?
04 / 09 / 2021 04 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 182 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76060 Doctor Strange ၏ Sanctum Sanctorum, ၇၆၁၀၈ Sanctum Sanctorum Showdown, 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, MCU, Reddit, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
၏လတ်တလောဇာတ်လမ်းတွဲ Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? LEGO Doctor Strange Sanctum အဟောင်းမှာပြန်ပြက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်
LEGO ကိုအနီးကပ်ကြည့်ပါ Spider-Man: No Way Home ၏အနက်ရောင်နှင့်ရွှေရောင်ဝတ်စုံအသစ်
19 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 260 Views စာ 1 မှတ်ချက် 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego မှ marvel, Lego Spider-Man, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Marvel, MJ, Spider-Man, Spider-Man: အိမ်သို့, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, Wong က
အဆိုပါ LEGO Group ၇၆၁၉၅ ၏ပုံများကိုထပ်မံထုတ်ဝေသည် Spider-ManDrone Duel ကငါတို့ကိုအကောင်းဆုံးကြည့်ပေးနေသည်
LEGO ၏ပုံများ Marvel Spider-Manအိမ်ပြန်လမ်းမရှိ
19 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 278 Views စာ0မှတ်ချက် 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego မှ marvel, Lego Spider-Man, LEGO.com, Marvel, MJ, Spider-Man, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., Spider-Man: အိမ်သို့, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, အဆိုပါ LEGO Group, Wong က
အဆိုပါ LEGO Group ပြီးတော့အွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်တစ်ခုကလာမယ့် LEGO ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပိုပြခဲ့တယ် Marvel အပေါ်အခြေခံပြီး set ကို Spider-Man:
ဗီဒီယို - LEGO တိုင်း Marvel Collectible Minifigure ကရှင်းပြသည်
19 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 250 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Brick Fanatics YouTube ကို, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, Spider-Man, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, YouTube ကို, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
LEGO 71031 ရှိဇာတ်ကောင်တိုင်း၏နောက်ကွယ်တွင်မည်သူ့ကို၊ မည်သူ၊ မည်သည်နေရာတွင်သင်ယူပါ Marvel Studios Collectible Minifigures နှင့်အတူ Brick Fanaticsနောက်ဆုံးပေါ်ဗီဒီယို
LEGO ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ Marvel 76201 ဗိုလ်ကြီးကို CartEr & The Hydra Stomper ကပိုကောင်းတဲ့ set လား။
13 / 08 / 2021 13 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 266 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76060 Doctor Strange ၏ Sanctum Sanctorum, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Captain America, Captain America: The First Avenger, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, သေးသေးလေး, Peggy ကို Carter, အနီရောင် ဦး ခေါင်းခွံ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါ LEGO Group, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
၏ပထမဦးဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲ Marvelဘာဖြစ်လဲ…? LEGO 76201 ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ
မှငါးအချိန် MarvelLEGO အစုံလိုအပ်သည့် Infinity Saga
03 / 07 / 2021 03 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 277 Views စာ0မှတ်ချက် 10214 မျှော်စင်တံတား, ရွံရှာဖွယ်, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, ဒေါက်တာထူးဆန်းတယ်, ဒေါက်တာ ထူးဆန်း, ဝေးနေအိမ်, ဟောင်ကောင်, hulk, သံမဏိလူသား, Iron Man 3, Lego, Lego သံက Man, Lego မှ marvel, Lego Spider-Man, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Spider-Man, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., အဆိုပါ Incredible Hulk, Thor, မျှော်စင်တံတား
နှင့် LEGO Group ဒီနွေရာသီရဲ့စူပါဟီးရိုးအစုံတွေအတွက် MCU ကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ရအောင်
Spider-Man: No Way Home ကုန်ပစ္စည်းများသည် LEGO အသစ်၏မူလအစကိုဖော်ပြသည် Spider-Man မင်္ဂလာပါ
02 / 07 / 2021 02 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 495 Views စာ0မှတ်ချက် 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Funko, Lego, Lego မှ marvel, Lego Spider-Man, Marvel, marvel ဒဏ္ဍာရီ, Spider-Man, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., Spider-Man: အိမ်သို့, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, အဆိုပါ LEGO Group
နယူး Spider-Man: No Way Home ကုန်ပစ္စည်းများကလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည့်အနက်ရောင်နှင့်ရွှေ LEGO ၏အရင်းအမြစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် Spider-Man အသစ်ကအကြံပြုခြင်း minifigure
အသစ် LEGO ဖြစ်ကြသည် Spider-Man: No Way Home ကအမှန်တကယ်ရုပ်ရှင်အတွက်အကြီးအကျယ်လုယူသူကိုသတ်မှတ်ပေးမှာလား
02 / 07 / 2021 19 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 538 Views စာ0မှတ်ချက် 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego မှ marvel, Lego Spider-Man, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, နစ်ခ် Fury, Samuel L. Jackson လည်း, Spider-Man, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., Spider-Man: အိမ်သို့, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, အဆိုပါ LEGO Group
အဆိုပါ LEGO Groupအသစ်သုံးခု Spider-Man အစုံများသည် web-slinger ၏တစ်ခုတည်းသော trilogy ပာမှဆွဲယူပုံရသည် Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာရုပ်ရှင်